Maamulka gobolka Banaadir oo amray in ciidamo Milatari ah lagu arki karin gudaha Muqdisho | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maamulka gobolka Banaadir oo amray in ciidamo Milatari ah lagu arki karin...
Maamulka gobolka Banaadir oo amray in ciidamo Milatari ah lagu arki karin gudaha Muqdisho
Kulan ay yeesheen Guddiga Amniga ayaa waxaa ay kasoo saareen amaro dhinaca Amniga oo la farayo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta Dowladda iyo Gaadiidleyda ku nuul Magalada Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Eng Cabdiraxmaan Cumar (Yariisow) iyo Xubnaha Guddiga Amniga Gobolka Banaadir,waxana kulankaas uu daba socday,kadib falal amnidarro oo ka dhacay Magalada Muqdisho.
Amarda laga soo saaray Kulankaas ayaa waxaa Warbaahinta u sharaxay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir,waxaana uu sheegay in marnaba Magalada Muqdisho aan lagu arki karin askarta ku labisan dareeska Millateriga,waxaana qaar ka mid ah mas’uuliyiinta dowladda uu ka dalbaday inay joojiyaan ilaaladooda oo mararka qaar lagu arko gudaha Magalada.
Dhinaca kale guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa digniin u diray Milkiilayaasha gaadiidka sida bajaajta iyo gaadiiska kale,isaga oo sheegay inay gaadiidkooda diiwaangeliyaan,isaga oo sheegay in ddka iska iibiya gaadiidkooda u diiwaangashan dhibaatadii lagu geysta ay mas’uuliydooda qaadi doonaan.
Amaradaan ku saaban dhanka amniga gaar ahaan in Magalada Muqdisho aan lagu arki Karin Askarta ku lkabisan dareeska Ciidanka Millateriga ayaa horay waxa u soo saaray Wasiirka Amniga Soomaaliya,hayeeshee amarkaas uusan dhaqan gelin.
Previous articleAl-Shabaab oo guddoomiye u magacowday magaalada Muqdisho
Next articleDEG DEG Axmed Madoobe oo ciidan diyaarsaday, MW Galmudug DF u wado oo la ogaaday & Talaabada Biixi